5 Nzira dzeKudzivisa Hupombwe seMashoma | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Kurarama nehumwari 5 Nzira dzeKudzivisa Hufeve seSingles
Nhasi tichange tichidzidzisa munzira shanu dzekusiya hupombwe sevamwe. Hupombwe kusangana pabonde kwevanhu vasina kuroorana zviri pamutemo. Kana murume asina kuroora uye mukadzi asina kuroorwa akauya pamwechete kuzoita bonde, ndihwo hupombwe. Kuroora chinhu chinofanira kukudzwa uye zvese zvinofanirwa kuitika mukati mehukama hwemuchato zvinofanirwa kuve zvinokudzwa. Bhuku ra VaHebheru 13: 4 inotsanangurazve uyu Muchato unokudzwa pakati pevose, uye mubhedha hauna kusvibiswa; asi mhombwe nezvifeve Mwari uchatonga.
Mwari vanosema hupombwe, mudiki Akatiyambira pamusoro pechiito cheupombwe murugwaro paakapa iwo gumi mirairo kuna Muporofita Mosesi. Rangarira kuti rugwaro runoti muviri wedu itemberi yaIshe saka tinofanira kuedza kurichengeta riri dzvene. Rugwaro rwacho rwunotsanangurazve hunyoro hwehunhu hwehupombwe. Mubhuku ra 1 VaKorinde 6:18 Tizai upombwe. Zvivi zvese zvinoitwa nemunhu zviri kunze kwemuviri, asi unoita upombwe unotadzira muviri wake. Kana isu tichiita chiito cheufeve, isu hatitadzi chete kuna Mwari, isu tinoshora mubhedha uye tinotadzira muviri wedu. Imwe yemhedzisiro yakaipa yeiyi ndeyekuti inoisa mweya waMwari muhupenyu hwemurume.
Migumisiro Yakashata Yeufeveation
Kune zvakawanda zvakashata zvinokonzeresa zvehupombwe. Zvimwe zvezvinyanyozivikanwa ndezvi:
Inokunda Mweya waMwari muMunhu
Mweya waMwari inyasha dzaMwari kumunhu wese. Uye rangarira chinyorwa chinoti isu tinoramba tichirarama muzvivi uye nekukumbira kuti nyasha dziwande? Muviri wemurume unogadza mweya waMwari. Kana hupombwe hwave kuita kwezuva, mweya waMwari unotanga kubuda zvishoma nezvishoma uye nguva iri kuuya apo munhu akadaro anenge asisina kanaota yemweya zvakare.
Zvinotora Kuvapo kwaMwari Kure
Kana munhu achinge apinda muchivi chebonde, mweya wekuvapo kwaMwari unobva pamurume akadaro. Zvichakadaro, hupenyu hwedu hwese sevanhu kuve neikoinonia naMwari. Chimwe chezvinhu chinogona kuparadza hukama ihwohwo zvivi. Kunyanya kutadza kwemunhu, mweya waMwari unobva wabva maari.
Zvinotadzisa Kuzadzikiswa Kwakaitika
Kune chinangwa chekuvapo kwemunhu wese wepanyika. Nzvimbo zhinji dzakaparadzwa paaritari yezvivi zvepabonde. Reuben akarasikirwa nechinzvimbo chake semwana wekutanga nekuti akapinda muchivi chebonde nemukadzi wababa vake. Josefa angadai asina kuve chinhu chakakura muhupenyu dai akagutsa nemukadzi watenzi. Genesi 39:12 akamubata nenguvo yake, akati, "Vata neni." Asi iye akasiya nguvo yake muruoko rwake, akatiza, akamhanyira panze. Chinyorwa chakanyora kuti Joseph akatiza kubva panzvimbo.
Nzira Yokudzivisa Ufeve
Imwe yedzakanakisa nzira dzekukunda mweya weufeve ndeye kuburikidza nerubatsiro rwaMwari. Nyasha dzekukunda iko kunzwa kana muyedzo kune hupombwe ichasunungurwa uye nzvimbo chete iyo murume anogona kuwana iyo nyasha kuburikidza nerubatsiro rwaMwari.
Kumbira Mwari kuti akubatsire, udza mweya mutsvene waMwari kuti ubatsire iwe kukunda muyedzo weupombwe. Panogara paine kukakavadzana pakati penyama nemweya. Mweya unogara uchida asi nyama isina simba. Izvi zvinotsanangura kuti sei munhu achifanira kugara achitsvaga rubatsiro kubva kuna Mwari.
Kushevedzera kwakaita Mupostori Pauro kuna Mwari kuti vabatsirwe. VaRoma 7: 15 Nekuti izvo zvandinoita kubvumira kwete nokuti chii ndingade kuti handiiti; asi zvandinovenga kuti vanoita I. Chema kuna Mwari uye Iye achakubatsira.
Mazhinji egomba rechivi ratinowira mariri nekuda kwekuzvibata. Murume asingazive zvaanomira anowira chero chinhu. Joseph aiziva kuti aive ani ndosaka aisakwanisa kukanganisa chinangwa paartari yechivi chepabonde. Aive akazvibata zvakanyanya uye akazvishingisa kuti asatombopinda mune chero hupombwe.
Kusvikira murume achiranga nemaune nezve zvimwe zvinhu, aigara achiwira pasi pane chero mukana wakapihwa.
Sec kubatanidza vaviri peoole. Ndosaka Bhaibheri richiti 1 VAKORINDE 6: 16 Kana imi hamuzivi here kuti uyo unosanganiswa nechifeve wava muviri umwe nacho? Nokuti, "anodaro," vachava nyama imwe. " iva chirango kuti usabatana nehure.
Kuroora kunokudzwa. Mubhedha unofanirwa kusvibiswa. Rega iye ari zera rekuroora aroore pane kuti apinde muchivi chebonde. Paunenge wasvitsa zera rekuroora, usarega muyedzo woufeve uchikumanikidza kupinda muchivi. Panzvimbo pekuzvibata mukutadza pabonde, zvirinani kuti ugadzikane muwanano.
Kuroora ndiko kuuya pamwechete kwemurume nemukadzi kuzova murume nemukadzi. Mathew 19: 5 ndokuti: Naizvozvo murume uchasiya baba vake namai vake, anamatire mukadzi wake, ava vaviri vachava nyama imwe.
Chinyorwa chinoti kutya kwekutanga kwehungwaru. Kurega hupombwe hakuzi nesimba. Mumwe anoda huchenjeri hwababa kuti akwanise kuziva muyedzo uye kuutiza. Uye huchenjeri hwaIshe hwakadzika midzi mukumutya. Kana isu tichitya Ishe, isu taiteerera yese mirairo yake kunyangwe kana zvisiri izvo kuti tidaro. Chinyorwa chakaita kuti tinzwisise kuti mumwe wemirairo yatakapihwa naMwari kurega kuita hupombwe. Izvi imhaka yekuti Mwari anoda kuvaka rudzi rwevanhu vatsvene.
Nekudaro, kana kutya kwaIshe kusipo, zvinova zvakaoma kwazvo kuti usafeve. Tinofanira kutya Ishe sezvatinoona, tinofanira kumutya saIye ari kumashure kwedu. Bhuku ra Mapisarema 119: 11 inoti Shoko renyu ndakariviga mumoyo mangu, Kuti ndirege kukutadzirai. Chengeta shoko raIshe mumoyo mako, kuti urege kumutadzira.
Previous nyayaNzira 5 Dzokudzivisa Upombwe Muwanano
inoteveraNzira shanu dzekukunda Kutya sevatendi
Tertulien marlon Chikumi 18, 2021 Panguva ya8: 55 pm
CHIDZIDZO ISHEERI DUIDELIJK